सहयोगी विकास बैङ्कको खुद नाफा २ करोड २३ लाख | गृहपृष्ठ
Home लगानी सहयोगी विकास बैङ्कको खुद नाफा २ करोड २३ लाख
सहयोगी विकास बैङ्कको खुद नाफा २ करोड २३ लाख
भदौ २८, काठमाडौं (अस)। आव ०६७/६८ मा सहयोगी विकास बैङ्कको खुद नाफा १४ प्रतिशतले बढेको छ । आव ०६६/०६७ मा रू. १ करोड ९५ लाख ९८ हजार रहेको बैङ्कको खुद नाफा गत आवमा रू. २ करोड २३ लाख ३६ हजार पुगेको हो । बैङ्कले प्रकाशित गरेको आव ०६७/६८ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा बैङ्कको सञ्चालन मुनाफा १५ प्रतिशतले बढेपछि खुद नाफा १४ प्रतिशतले बढेको हो । सो अवधिमा बैङ्कको कर्मचारी तथा अन्य सञ्चालन खर्च बढे पनि कुल सञ्चालन आम्दानी पनि वृद्धि हुँदा सञ्चालन मुनाफा बढेको हो । बैङ्कको कर्मचारी तथा अन्य सञ्चालन खर्च क्रमश: ४८ र ३५ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल सञ्चालन आम्दानी ३३ प्रतिशतले बढेको छ ।
आव ०६७/०६८ मा बैङ्कको लगानी रू. ४ करोड रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले कुनै सापटी लिएको छैन । समीक्षा अवधिमा बैङ्कको व्यक्तिगत आवास कर्जा ७३ प्रतिशतले बढेर रू. ८ करोड ९९ लाख ५४ हजार पुगेको छ । आव ०६७/६८ मा बैङ्कले बिजनेश कम्प्लेक्समा कुनै कर्जा प्रवाह गरेको छैन । तर, अन्य रियल इस्टेट क्षेत्रमा भने रू. २ करोड ४९ लाख ४४ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । समीक्षा अवधिमा बैङ्कले आवधिक कर्जामा कुनै कर्जा प्रवाह गरेको छैन भने अधिविकर्ष(ओभर ड्राफ्ट) कर्जा र ‘अन्य’ कर्जा भने बढेको छ । यी शीर्षकका आवधिक कर्जामा १०६ र १६ प्रतिशत वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवको असार मसान्तसम्म बैङ्कको कर्जा-निक्षेप अनुपात ६३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत छ । सो अवधिमा बैङ्कको निक्षेप ६९ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ८७ करोड ५९ लाख २२ हजार रहेको छ भने कर्जा तथा सापटी ४९ प्रतिशतले बढेर रू. ६१ करोड ९२ लाख ५४ हजार रहेको छ ।
बैङ्कको निक्षेपमा वृद्धि भएको छ र खुद ब्याज आम्दानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको छ । त्यसैगरी, बैङ्कले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्टयाएको रकममध्येबाट रू. २५ लाख १७ हजार पनि फिर्ता भएको छ ।अधिल्लो वर्षमा बैङ्कको यस्तो आम्दानी थिएन । आव ०६६/६७ को अन्त्यमा शून्य दशमलव ८७ रहेको बैङ्कको निक्रिय कर्जा गत आवको अन्त्यमा शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा बैङ्कको सञ्चालन मार्जिन र मुनाफा मार्जिन पहिलो वर्षको तुलनामा घटेको छ । सो अवधिमा सञ्चालन मार्जिन शून्य दशमलव २९ र मुनाफा मार्जिन शून्य दशमलव २० रहेको छ । त्यसैगरी असार मसान्तमा बैङ्कको मूल्य आम्दानी अनुपात ९ दशमलव ६७ रहेको छ भने २०११ सेप्टेम्बर ८ को कारोबारअनुसार यो अनुपात ८ दशमलव ८३ रहेको छ । बैङ्कको तरलता अनुपात ३७ दशमलव ४८ पुगेर स्थित सन्तोषजनक रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैङ्कको निक्षेप, तरलता आदि विवरण हेर्दा उत्साहजन रूपले वृद्धि भएको देखिन्छ ।